China imboni yomshini wokugcwalisa isiphuzo samandla nefektri nabaphakeli Sawubona
Umugqa wethu wokugcwalisa isiphuzo samandla uhlanganisa ukuhlanza ibhodlela, ukugcwalisa nokufaka umshini kumshini owodwa we-monoblock. Izinqubo ezintathu zenziwa ngokuzenzakalela ngokuphelele. Ukugcwalisa ibhodlela le-PET noma ibhodlela lengilazi noma ibhodlela likabhodlela konke kungenziwa ngezifiso.
Umshini Wokugcwalisa Amandla Esiphuzo se-3 ku-1 Monobloc Production Line
2.Energy isiphuzo ukugcwaliswa umshini (Washing / filling / capping 3-in-1 mono-block)
Ibhodlela lingena engxenyeni yokuhlanza yomshini omathathu koyedwa nge-air conveyor. Isibambiso esifakwe kudiski ejikelezayo sibamba ibhodlela bese siyiphendula ngaphezu kwama-degree ayi-180 bese senza ubuso bebhodlela bube phansi. Endaweni ekhethekile yokuhlanza, umbhobho ku-gripper ufafaza amanzi okugeza i-inwall yamabhodlela. Ngemuva kokuhlanza nokukhipha, ibhodlela liphenduka ngaphezu kwama-degree ayi-180 kujantshi wesikhombisi futhi lenze ibhodlela libheke esibhakabhakeni. Ngemuva kwalokho ibhodlela elihlanziwe lidluliselwa engxenyeni yokugcwaliswa ngokukhipha i-starwheel yebhodlela. Ibhodlela elingena ekugcwaliseni liphethwe intamo ebambe ipuleti. I-valve yokugcwalisa eyenziwe yicam ingabona phezulu naphansi. Yamukela indlela yokugcwalisa ingcindezi. I-valve yokugcwalisa iyavula futhi iqale ukugcwaliswa lapho yehla futhi ithinte imbotshana yebhodlela, i-valve yokugcwalisa inyuka iye phezulu futhi ishiye ibhodlela lapho iqeda ukugcwalisa, ibhodlela eligcwele lidluliselwa engxenyeni ye-capping ngokusebenzisa ukubamba isondo lokuguqula intamo. Ummese wokumisa isitobha uphethe ibhodlela, ugcina ibhodlela limile lingaphenduki. Ikhanda le-screw capping ligcina kuguquko naku-autorotation. Ingakwazi ukuqeda yonke inkambo yokubamba kufaka phakathi ukubamba, ukucindezela, ukuskiya, ukukhipha isenzo sekham. Ibhodlela eligcwele lidluliselwa kumuntu ohambisa amabhodlela kunqubo elandelayo ngokusebenzisa i-starwheel. Umshini wonke uvalelwe ngamawindi, ukuphakama kwewindi elivalekile kuphakeme kunesiqongo somshini ongu-3 koku-1, ezansi kwewindi elivalekile kunendawo yokubuyisa umoya
● Ngaphandle kohlaka oluphansi, izingxenye zokudlulisa nezinye izingxenye okufanele zenziwe ngezinto ezikhethekile. Ezinye izingxenye ezisele zenziwe ngensimbi engagqwali 304.
● I-roller bearing yenziwa ngensimbi engagqwali, iringi yokufaka uphawu yenziwe ngezinto ze-EPDM, kuthi ipulasitiki yenziwe nge-UMPE.
● I-gripper yenziwa ngensimbi engagqwali, indawo lapho ibhande lakhiwe khona ngensimbi engagqwali, uma kuqhathaniswa ne-gripper yendabuko yenjoloba, inenhlanzeko enkulu, ihlala isikhathi eside, futhi ayinazo izingxenye ezigqokwa ngokushesha, izingxenye zesikulufa se-bottleneck can gwema ukungcoliswa yisibambisi senjoloba.
● I-gripper enombhobho wesifutho osebenza kahle kakhulu, ingaqala iye kunoma yisiphi isikhundla se-inwall yebhodlela, futhi ingonga amanzi wokuhlanza. Kukhona ikhava ngaphezulu kombhobho wesifutho ongavimbela ukuchitheka kwamanzi; futhi kunamapayipi okulawula kabusha okusetshenziswa kabusha namaphayiphu okusetshenziswa kabusha ngaphansi kwemibhobho.
● Isikhathi sokuhlanza singaqinisekiswa imizuzwana emi-2.
● Ngokulungisa ukuphakama kwezingxenye ezijikelezayo ukuzivumelanisa nokuphakama kwamabhodlela okuhlukile
● Isikhuthazo sisuselwa ohlelweni oluqhutshwa ohlakeni olwedluliswe ngamagiya.
● Ukunikezwa kwamanzi ahlanzwayo kulawulwa yi-solenoid valve.
● Kutholwe umkhiqizo odumile wokulwa nokugqwala ongagcini ukuthambeka onganciphisa ukungcola kokugcwaliswa kwemvelo.
● Ipuleti elizungezayo lenziwe ngensimbi engagqwali engu-304, ethwele amazinyo amakhulu ayizicaba.
● Ivelufa yomshini wokufaka ingcindezi yethulwa ukwakhiwa kwangaphandle okuthuthukile ngejubane lokugcwalisa okusheshayo, akukho phakethe lekhoneni lenhlanzeko, izingxenye ezimbalwa zokubekwa uphawu, kanye nokulawulwa kwezinga leketshezi eliqondile. I-valve yonke yenziwa ngensimbi yokudla ebangeni lokudla.
● I-valve yokugcwalisa iyavula futhi iqale ukugcwaliswa lapho yehla futhi ithinte imbotshana yebhodlela, i-valve yokugcwalisa inyuka iye phezulu futhi ishiye ibhodlela lapho iqeda ukugcwaliswa.
● Ukuhlinzekwa kwesiphuzo kuthatha i-othomathikhi ye-pneumatic valve magnetic-level liquid switch switch ukulawula ithangi eliwuketshezi ngokuzenzekelayo.
● Ukuthwala okushelelayo kutholwa ukungazondli, okunganciphisa ukungcoliswa kokugcwaliswa kwemvelo. Ukugoqa okugoqekayo okwenziwe ngensimbi engagqwali, indandatho yokufaka uphawu yenziwe ngezinto ze-EPDM, amapulasitiki enziwe nge-UMPE.
● Isisusa sokugcwaliswa sisuselwa ohlelweni oluqhutshwa ohlakeni futhi ludluliswa ngamagiya.
● Idrayivu eyinhloko isebenzisa i-gear drive, ngokusebenza kahle okukhulu, umsindo ophansi, impilo ende, ukugcinwa okulula, ukuthambisa okwanele, igrisi ingagcoba ukufaka ngaphakathi ngokuzenzakalela, yamukela i-transducer ijubane lemoto enkulu ukulawula, umshini usebenzisa isikhathi sokuguqula imvamisa engenasinyathelo . Izinto zalo lonke ipulatifomu nohlaka luyinsimbi yensimbi engenansimbi engagqwali ngaphandle.
● Umshini ulawulwa nge-othomathikhi yi-PLC, iphutha ekubonisweni kolayini, njengebhodlela, i-cap shortage njll.
● Izingxenye ezisemqoka nezakhi zikagesi zomshini zisebenzisa imikhiqizo yokungenisa.
Le yunithi yizinga eliphakeme kakhulu lokunemba komshini we-3-in-1, kubalulekile ukuthi umshini ugijime kahle nekhwalithi yomkhiqizo.
● Isikrini se-capping (izingxenye eziyinhloko ezingaqinisekisa ikhwalithi ye-capping), isazi sithuthukisa ukwakheka kwensimbi kazibuthe, lokhu kuthuthukiswa kunganciphisa izinga elingalungile lokufaka kahle futhi uhlamvu lwendabuko okulula ukusetha nokulungisa i-torque ye-screwing capping ikhanda.
● I-screwing capping head idizayini enezinhloso ezimbili: ilungele i-cap flat ne-cap cap.
● Idivayisi engakhipha ikepisi ebuyela emuva futhi ivimbele ukudluliswa kwekepisi ebuyela emuva ixazululwe kumhlahlandlela we-cap-falling.
● Iqembu lokushintshwa kwe-photoelectric lixazululwe kumhlahlandlela wokuwa kwe-cap. Umshini uzoma lapho kungekho cap kumhlahlandlela.
● Iswishi yokuthola ibhodlela iyaxazululwa ku-caper screwing.
● Kunemibhobho ye-aseptic phakathi kwesondo lokuphokophela okuguqukayo nezingxenye zokugcwalisa ukugeza umkhiqizo ogcinwe ezingxenyeni ze-bottleneck screw.
● Kukhona isilinda se-cap-lock ejoyintini eliphakathi komhlahlandlela wokuwa kwekepisi nepuleti yelekisi yokupheka. Kuyinto uqaphele ukuthi akukho yokudla akukho cap.
● Ngokulungisa ukuphakama kwezingxenye ezijikelezayo ukuzivumelanisa nokuphakama kwamabhodlela okuhlukile.
● Isikhuthazo se-screwing capper sisuselwa ohlelweni oluqhutshwa ohlakeni futhi ludluliswa ngamagiya.
● Izingxenye eziyinhloko zensimbi yokucubungula zicutshungulwa isikhungo esisebenza ngokulawulwa kwedijithali
I-cap loader idlulisa amakepisi emshinini we-cap unscrambling.
Inomsebenzi wokungabikho kokulayishwa kwebhodlela, ukulawula okuzenzakalelayo.
Kukhona ukushintsha komtshina ku-cap sorter, lapho i-cap inganele, umtshina ku-cap sorter uthola isignali yokushoda kwekepisi, ikheshi lekepisi liqala. Amakepisi asethangini adlula esigqokweni sebhande esiya ku-cap sorter. Ingashintsha ubukhulu bethangi lokungena nge-flashboard; lokhu kungalungisa ijubane lekepisi eliwayo.
4. Ibhande elihambayo
Langaphambilini Umugqa Womshini Wokugcwalisa Isiphuzo Ongena-carbonated
Olandelayo: Umshini Wokugcwalisa I-PET Bottle Hot Hot
Umugqa womshini wokugcwalisa iziphuzo ezithambile
Umugqa Womshini Wokugcwalisa Isiphuzo Ongena-carbonated